40 taona nanabeazana
ny fahasoavan’Andriamanitra dia ho feno 40 taona ny 2018 iry ny INSTITUTION FJKM RAINANDRIAMAMPANDRY fantatra ihany koa tamin’ny anarana hoe KOLEJY TEKNIKA RAINANDRIAMAMPANDRY.
40 taona nanabeazana, nisedrana ny mafy sy ny sarotra, nisitrahana ihany koa ny fitahiana sy ny fitantanana mahery avy tamin’Ilay Tsitoha.
Mpianatra miisa 12.000 teo ho eo no nandalo sy nobeazina tato amin’ny sekoly. Tsy vitsy tamin’izy ireny no tonga olom-banona,manam-pahaizana, mpiasam-panjakana ambony eto amin’ny firenena: mpitsara, mpitsabo, mpampianatra, … Misy ireo lasa tany ampitan-dranomasina nanohy ny fianarany na niasa ihany koa.
Ray aman-dReny an’arivony no nisitraka ny tolotra nisy teto amin’ny sekoly: fitaizana ara-panahy,fanabeazana amin’ny maha olona feno, ny fampianarana teknika izay tena nahafantarana ny sekoly, fa indrindra ny saram-pianarana mora raha ampitahaina amin’ny tolotra sy ny kalitaony.
“Velona ho an’ny hafa” tokoa ny Fiangonana Ankadifotsy, ary ny sekoly no sehatra voalohany nanehoany izany.
40 taona aty aoriana, mivoatra ny tontolo, miova ny rivotra mitsoka,miova ireo mpitantana, … Tsy hiova anefa ny sekoly IFR, mainka hijoro sy hihatsara ary hitazona ny maha izy azy sy ny nahafantaran’ny maro azy: sekolim-pinoana, sekoly teknika, sekoly mitsinjo ireo ankohonana sahirana.
Resy lahatra izahay mpitantana ny sekoly ankehitriny, fa tena rariny tokoa, raha voamarika eo amin’ny fiainan’ny sekoly izao nahatratrarany ny 40 taona izao. Ho fankalazana an’Andriamanitra ihany koa sady ho fitaomana ny mpianakavin’ny finoana rehetra hankamamy ny sekoliny.
Trano famakiamboky vaovao, efitra fianarana informatika vaovao, fanokafana indray ny laboratoaran’ny SVT sy ny Science Physique, izany no tsangambato apetraky ny sekoly amin’izao fankalazana ny 40 taona nanabeazana izao.
Affichage de 1 à 3 sur 3 | 1 2 »